(OTP)- Madaxweynihii horre ee Kililka Cabdi Maxamuud ayaa Maxkamada la keenay Maanta waxaan la dhagaystay dacwad iskugu jirta Gobaad fallo ka dhacay Deegaanka intuu ahaa Hogaanka Nabadgalayada Iyo Madaxweynaha Kililka muddadii 7 sanno ahayd. Dacwada Maxkamada ayaa waxaa ku...
(Ogadentoday Press)-Gudoomiyaha Ururka OLF ee Qoomiyadda Oromada Daauud Ibsa ayaa shaaciyay in gabi ahaanba aysan wax hub ah aysan dhigaynin. Daud Ibsa oo u waramayay Warbaahinta Oromo ayaa sheegay in aysan Itoobiya oogu laabban inay halgan nabadeed qaataan. Isagoo goordhawayd...
(Ogadentoday Press)- Xisbiga isbahaysiga tallada Dalka Itoobiya hayay oo ku midoobeen afarta qoomiyadooda kalle ah Tigreega, Axmaarada Iyo Oromada ayaa sharci cusub soo saaray midkaas dhigaya in qofka aan 3 qoomiyadood ahayn oo ka mid noqon karro Xisbiyadaas. Qaar ka mid ah dadka...
OTP- Madaxweynaha Ku meel gaadhka ah Mustafe Maxamed Cumar ayaa maanta Golaha Barlamaanka soo hordhigay Liiska Golle Wasiiro oo 27 ka koobaan kuwaas Aqoon baddan leh. Sida Madaxweynaha sheegay Masuuliyiintan ayaa lagu soo dhisay, Aqoontooda, Deegaanka Iyo Awood qaybsiga Beelaha....